Malunga neNtlanganiso yakho elandelayo | Martech Zone
Malunga neNtlanganiso yakho elandelayo
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 17, 2010 NgeCawa, uJuni 28, 2015 Douglas Karr
Kudala ndicinga kakhulu ngeentlanganiso kutshanje. Inqaku likaSeth Iziganeko zenkampani zonyaka Ndikhuthazile ukuba ndiqalise ukwenza esi sithuba. Njengomntu oneshishini lomqeshwa omnye, kuya kufuneka ndilumke kakhulu ukuba zingaphi iintlanganiso endiya kuzo ezingafakwanga ingeniso.
Suku ngalunye, ndiye ndimenyelwe ezintlanganisweni - ikomityi yekofu okanye isidlo sasemini. Uninzi lwexesha, ubudlelwane bobuchwephesha okanye bade bukhokele kungoko kungenzi ngeniso namhlanje, kodwa ngomso ingakhokelela kwinto ethile. Ezi ntlanganiso zinomdla omangalisayo… zihlala ziqokelela iingcinga okanye zicwangcise malunga nenkampani, ukuthengisa kwazo, okanye itekhnoloji eyonyukayo.
Oko kwahluke kakhulu kuxa bendihlala ndisebenza kwiinkampani ezinkulu ezazibamba iintlanganiso mihla le, nangona kunjalo. Iintlanganiso ezinkampanini zibiza kakhulu, ziphazamisa imveliso, kwaye zihlala ziyinkcitha xesha. Nalu uhlobo lweentlanganiso ezonakalisa inkcubeko yeshishini:
Iintlanganiso ezibanjiweyo ukufumana ukuvumelana. Amathuba kukuba uqeshe umntu onoxanduva lokwenza umsebenzi. Ukuba ubambe intlanganiso yokuthatha isigqibo ngabo… okanye okubi kakhulu… ukuthatha isigqibo kubo, wenza impazamo. Ukuba awumthembi umntu ukuba enze lo msebenzi, mgxothe.
Iintlanganiso zokusasaza imvumelwano. Oku kwahluke kancinci… ngokwesiqhelo kubanjwa ngumenzi wesigqibo. Akazithembi kwisigqibo sabo kwaye woyika malunga neziphumo. Ngokubamba intlanganiso kunye nokufumana imvumelwano kwiqela, bazama ukusasaza ityala kunye nokunciphisa ukuphendula kwabo.
Iintlanganiso zokuba neentlanganiso. Akukho nto imbi njengokuphazamisa usuku lomntu kwintlanganiso yemihla ngemihla, yeveki, okanye yenyanga apho kungekho ajenda kwaye akukho nto yenzekayo. Ezi ntlanganiso zibiza kakhulu kwinkampani, zihlala zibiza amawaka eedola.
Intlanganiso nganye kufuneka ibe nenjongo engenakufikelelwa ngokuzimeleyo… mhlawumbi ukuqiqa, ukunxibelelana nomyalezo obalulekileyo, okanye ukwaphula iprojekthi kunye nokwabela imisebenzi. Yonke inkampani kufuneka yenze umthetho-intlanganiso ngaphandle kwenjongo kwaye i-ajenda kufuneka inqatshelwe ngummemileyo.
Kwiminyaka emininzi eyadlulayo, ndahamba ngeklasi yobunkokheli apho basifundisa khona ukuba sibeneentlanganiso. Oko kunokuvakala kuhlekisa, kodwa iindleko zeentlanganiso kwimibutho emikhulu zibalulekile. Ngokusebenzisa yonke intlanganiso, ugcine imali, ixesha, kwaye wakha amaqela akho endaweni yokuwenzakalisa.
Iintlanganiso zeqela zazinenkokeli, a umbhali (ukuthatha amanqaku), a umgcini wexesha (ukuqinisekisa ukuba intlanganiso ibibambe ngexesha), kunye umgcini wesango (ukugcina isihloko). Umgcini-xesha kunye nomgcini-masango babetshintsha intlanganiso nganye kwaye babenegunya elipheleleyo lokutshintsha izihloko okanye ukuphelisa iseshoni.
Imizuzu eli-10 yokugqibela okanye nganye yentlanganiso ibisetyenziselwe ukuphuhlisa Isicwangciso sokwenza. Isicwangciso sokusebenza sasineekholamu ezi-3-- Ngubani, Yintoni, nini. Kuchazwe kwinyathelo ngalinye yayikukuba ngubani oza kwenza lo msebenzi, zeziphi izinto ezinokulinganiswa ezazinokulinganiswa, kwaye zaziza kuba nini. Yayingumsebenzi weenkokheli ukwenza abantu baphendule ngezinto ekuvunyelwene ngazo ekuvunyelwene ngazo. Ngokumisela le mithetho yeentlanganiso, sakwazi ukutshintsha iintlanganiso ekubeni ziphazamise kwaye saqala ukuzenza ukuba zivelise.
Ndingakucela umngeni ukuba ucinge ngentlanganiso nganye onayo, nokuba yeyokwenza ingeniso, nokuba inemveliso, kwaye uyilawula njani. Ndisebenzisa Ngekhalenda ukucwangcisa iintlanganiso zam Kwaye uhlala ezibuza ukuba zingaphi iintlanganiso endinokuzenza ukuba ubuya kuhlawula umrhumo ngekhadi letyala ukuze ulicwangcise! Ukuba bekufuneka uhlawulele intlanganiso yakho elandelayo ngaphandle komvuzo wakho, ubungayifumana?
tags: ikhalendaNtla nganisoizizathu zeentlanganisocwangcisa
Icebo lokucoca izihlokwana kuGoogle Analytics
Izikhokelo ezine zokuFunda iWebhu
Feb 18, 2010 ngo-6: 38 AM
Doug, ndingathanda ukucwangcisa intlanganiso kunye nawe ukuze sixoxe ngale nto ngakumbi. 🙂
Ndakhe ndeva umntu ohlekisayo esithi iintlanganiso ziya kuhamba ngokukhawuleza e-America xa umququzeleli eqala intlanganiso ngokucela wonke umntu ukuba aphakamise isandla ukuba basasebenza kuyo nantoni na abayenzayo izolo.
Feb 20, 2010 ngo-12: 26 PM
Iposti eyoyikekayo! Ifilosofi "Zonke iintlanganiso azinyanzelekanga" sisikhokelo seROWE, inkampani yam ebesiyonwabela iminyaka eliqela ngoku. Uninzi lwethu lubeka ixabiso kwizinto ezingalunganga, ezinje nge "xesha lobuso ", okanye ukugcwalisa isitulo ngexesha elimiselweyo. Iintlanganiso kunye nexesha lobuso zilungile kwaye zixabisekile kumxholo ofanelekileyo kodwa akufuneki sivumele ezi zinto zisinike inkohliso yemveliso xa ingekho ngqiqweni.